Eric Funk နှင့်အတူ PBS Series 11th & Grant သည် DPA မိုက်ခရိုဖုန်းပေါ်တွင်မှီခိုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဲရစ် Funk နှင့်အတူ PBS စီးရီး 11th & Grant က DPA မိုက်ခရိုဖုန်းပေါ်တွင်မူတည်
PBS စီးရီး အဲရစ် Funk နှင့်အတူ 11th & Grant က DPA မိုက်ခရိုဖုန်းပေါ်တွင်မူတည်
အသံဒါရိုက်တာကယေရမိ Slovarp ဃအပေါ်မှီခို: 4099 စာရွက်စာတမ်းနှင့်ဃ™မဲ: စစ်မှန်သော™ သူဟာ Emmy Award ဆု-အနိုင်ရဂီတအစီအစဉ်အတွက်အသံမိုက်ကရိုဖုန်း
BOZEMAN, Montana, သြဂုတ် 27, 2015 - အဘယ်သူမျှမကိစ္စအနုပညာ-ဂန္, ကျောက်, jazz သို့မဟုတ်စတိုင်များ-The တစ်ဂီတပညာရှင်ရဲ့ယာဉ်များ၏မသိမသာကှဲပွား၏ Fusion ကိုသန့်ရှင်းသောဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ PBS စီးရီးများအတွက်စနစ်တကျထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးပွေလီလှဖမ်းယူနိုင်ရန်အတွက် အဲရစ် Funk နှင့်အတူ 11th & Grant ကအသံဒါရိုက်တာကယေရမိ Slovarp အပေါ်မှီခို DPA မိုက်ခရိုဖုန်း '' ဃ: စန်ဒရားအဘို့အမဲ™ 4099 စတီရီယိုမိုက်ကရိုဖုန်းစနစ်, ဃ: 4099 ဂန္ထဝင် Tour Kit ™မဲ နှင့် ဃ: စစ်မှန်သော™ဆိုသံမိုက်ကရိုဖုန်း။ မိုက်ခရိုဖုန်း၏စုဆောင်းမှုကိုပါဝါ, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ပရိယာယ် Slovarp အဆိုပါသူဟာ Emmy Award ဆု-အနိုင်ရရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
"ဒါဟာအထူးသဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးသည်အလွန် High-end ပြပွဲဖွင့်, ဒါကြောင့်ဂီတရုပ်သံပြပွဲဖွင့်သောကွောငျ့, ကကြီးမြတ်အသံရမယ်, အမြင်အာရုံကင်မရာအပေါ်ဆွဲဆောင်ခံရဖို့ရှိပြီး," Slovarp ကပြောပါတယ်။ သူတို့အများအားဖြင့်သေးသေးသကြီးမြတ်အသံမမြင်ရတဲ့ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်မဲ™ 4099 MICS, အထူးသဖြင့်ကင်မရာကိုအဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့: "ငါဃတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ "
ပြပွဲအပေါ်အသုံးပြုမှုအဘို့ထိုသူတို့ဝယ်ယူရန်သူ့ကိုသတိပေးခံရရသောတိုက်ရိုက်စန္ဒရားသရုပ်ပြ, စဉ်အတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်အတွက်မဲ™ 4099 MICS: Slovarp ပထမဦးဆုံးဃမျက်မြင်။ သူကအစုအပေါ်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လေ့လာတွေ့ရှိပြီးတာနဲ့သူကညာဘက်ကိုရှေးခယျြမှုလုပ်သောသိတယ်။ "Mikng တစ်စန္ဒရားလုပ်ဖို့တကယ်ခက်ခဲများနှင့်ကောင်းစွာလုပ်ဖို့ပင်ခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်" ဟု Slovarp ရှင်းပြသည်။ "ငါသည်ဃသို့ကြည့်မျှော်သောအခါသိတယ်: မဲ™ 4099 MICS နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသော application များအတွက်သူတို့ကိုမြင်လျှင်စတင်ခဲ့ပြီး, သူတို့ကကျနော်တို့ပြပွဲအပေါ်ကိုအသုံးပြုဖို့အခြားတူရိယာအပေါ်အလွန်ကြီးစွာသောအသံလိမ့်မယ်။ ဂန္အနုပညာရှင်များလုံးဝထားရှိရေးဦးမည်သောဤလာမည့်ရာသီ, အဘို့, d: မဲ™ 4099 MICS တစ်မိုးသည်းထန်စွာယလေ့ကျင့်ခန်းအရသွားကြသည် "!
အခုတော့သူ့ရဲ့ 11th ရာသီအတွက်, အဲရစ် Funk နှင့်အတူ 11th & Grant က Montana အတွက်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဟန်ပြဖြစ်လာသည်။ Bozeman, Montana အတွက် 11th နှင့် Grant ကလမ်းများမှာတည်ရှိပြီး KUSM-TV ကိုစတူဒီယိုမှာရိုက်ကူးနှင့်လည်းပြပွဲရဲ့အနုပညာဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူအောင်မြင်သောတေးရေးဆရာနဲ့ဂီတပညာရှင်အဲရစ် Funk ကတည်ခင်းဧည်, အဲရစ် Funk နှင့်အတူ 11th & Grant က ပြည်နယ်၏အများဆုံး, ကောင်းချီးအောင်မြင်သောနှင့်ရှေ့ဆောင်အခွက်တဆယ်ပါရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဇာတ်လမ်းတွဲပုံမှန်အားဖြင့်ဂီတအစဉ်အလာ, jazz, ဂန္, နိုင်ငံနှင့်အဇားဒက်ကိုတေးဂီတကနေ, ကျောက်, Fusion ကိုမှအရာအားလုံးကိုအမျိုးမျိုးကိုယ်စားပြုအနုပညာရှင်နှင့်အတူအနုပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုံပြင်နှင့်မြူးအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါဃအတူ Slovarp ရဲ့အပြုသဘောအတွေ့အကြုံကို: မဲ™ 4099 MICS အဖြစ်ကောင်းစွာ DPA ရဲ့ 4099 ဂန္ထဝင် Tour Kit ဝယ်ယူရန်သူ့ကိုသတိပေးခံရ။ တစ်ဦး Peli အမှု၌ကြွလာသောအဆင်သင့်လုပ်ကိရိယာအစုံ, အမျိုးမျိုးသောဂန္ထဝင်တူရိယာထားရှိရန်ကလစ်ပ်အမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ ဒါဟာရိုက်ကူးရေးကာလအတွင်းမိုက်ကရိုဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းရှာတွေ့ရိုးရှင်းစွာနှင့်အချိန်မရွေးဇာတ်စင်ပေါ်မှာခုနစ်အနုပညာရှင်များအများဆုံးပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဃ: မဲ™ 4099 မိုက်ခရိုဖုန်းဂီတသမားတစ်ဦးဇာတ်လမ်းတွဲ၏သင်တန်းကျော်ထုတ်လုပ်မှုပူးပေါင်းလာသောအခါအဘို့အဖြစ်အထောက်အကူဖြစ်စေ Add-ons တွေကိုဝတ်ပြုကြလော့။
"ဒီဂီတကိုသူတို့နေရာအရပ်ထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့ကြတူခံစားဖို့အသုံးပြု," Slovarp နေဆဲဖြစ်သည်။ "ဒါပေမယ့်ဃနှင့်အတူ: မဲ™ 4099 MICS, သူတို့ MICS ပုံမှန်အားချော်ဘယ်မှာနှစ်ချက် Bass နဲ့ cello အပေါ်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သောအရာ, ပတ်ပတ်လည်ရွှေ့ခြင်းနှင့်နည်းနည်းရှူနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဃ: မဲ™ 4099 မိုက်ခရိုဖုန်းကိုထားနေဖို့ "။
သင်္ဘောသား၏ကျန်မှအကျိုးကျေးဇူးများများအတွက်သကဲ့သို့, cameramen မကြာခဏအစုံပေါ်တွင်အသေးစားသေးအစွမ်းထက်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုတွေ့မြင်ရန်အလွန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ သူတို့ကလွယ်ကူသူတို့ကိုမဟုတ်ရင်မိုက်ကရိုဖုန်းကြိုးတွေနဲ့ဂီယာနှင့်အတူပိတျဆို့နတေဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်းတန်ဖိုးရှိသောအိမ်ခြံမြေန်းကျင်လုပ်ကိုင်ဖို့အတှကျပါစေ။
အခုတော့ DPA ကို အသုံးပြု. ၎င်း၏တတိယရာသီအတွက်, 11th & အဲရစ် Funk နှင့်အတူ Grant က အစီအစဉ်များ DPA ရဲ့ဃထည့်သွင်းဖို့: အ MICS သင်္ဘောသားအနုပညာရှင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့သံနီးကပ်လာရဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်အဖြစ်လာမည့်ဖြစ်စဉ်များအချို့များအတွက်ရောနှောသို့စစ်မှန်သော™ဆိုသံ microphone ။ Slovarp ကြောင့်မိုက်-to-မိုက်ကနေ DPA ရဲ့တသမတ်တည်းပွင့်လင်းသောအသံ၏သဘောသဘာဝရန်, ကြောင့်ပိုပြီးထုတ်လုပ်မှု၏အရည်အသွေးတိုးမြှင့်မည်ကိုထပ်ပြောသည်။
အပေါ်မိမိအလုပ်အပြင် 11th & Grant က အဲရစ် Funk နှင့်အတူ, Slovarp Jereco စတူဒီယို၏ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးစီးပွားဖြစ်မှတ်တမ်းတင်စက်ရုံနှင့် Peach လမ်းစတူဒီယိုတစ်ခုသမဝါယမထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို၏တည်ထောင်သူနှင့်ဥက္ကဋ္ဌ Bozeman တည်ရှိသောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သူသည်ရုပ်မြင်သံကြားဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံနှင့်နည်းပြဆရာနှင့် Montana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဂီတနည်းပညာအစီအစဉ်အဘို့အနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးအမျိုးသားအကယ်ဒမီများအတွက် Montana သဘာပတိဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ DPA isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော မိုက်ခရိုဖုန်း PBS တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-08-31
ယခင်: ChyronHego Lucy ဂရစ်ဖစ်ပြည့်စုံ Interface ကိုအားလုံး-နယူးဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်အတူ CAMIO 4.2 မိတ်ဆက်
နောက်တစ်ခု: #IBC2015 မှာ RF ဖြန့်ဖြူးအတွက်နည်းပညာသစ်များတခုအဖြစ်မှ ETL စနစ်များ